KISSmetrics wepụtara Akụkọ Na-ekpughe Nke Ọma | Martech Zone
KISSmetrics wepụtara Akụkọ Na-ekpughe Nke Ọma
Wednesday, October 22, 2014 Douglas Karr
Ọ na-adị ka otu egwuregwu mgbe niile KISSmetrics bụ otu nzọ ụkwụ n’ihu nke usoro ahụ ma ha nwere ike ịmela ya ọzọ na mgbakwunye a. Ọ bụrụ na ị mepee akụkọ Google Analytics flow, ị ga-enweta ụfọdụ data na-atọ ụtọ banyere etu ndị mmadụ si abịa na ịhapụ saịtị gị yana ọnụọgụ nke okporo ụzọ na-esite na ya… mana ị nweghị ike ịmata n'ezie ụzọ ndị mmadụ na-ewere.
Anyị nwere onye ahịa ugbu a na anyị nyere nghọta na atụmanya ahụ eletala saịtị ha ugboro iri na abụọ ma gafeela peeji 40 dị iche iche… mana ịbịaru ebe ha rutere na ebe ha hapụrụ bụ ihe na-egbu mgbu. Mee ka ọtụtụ puku ndị ọbịa mụbaa ọrụ ahụ ma ọ ga - abụ ihe na - agaghị ekwe omume.
Gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịmata niile ọdịda peeji nke gị na saịtị na mgbe ahụ na-ele a dị mfe akụkọ na gosiri ụzọ ndị mmadụ na-ewere site na gị na saịtị… ma eleghị anya, si a ọdịda peeji, ka a video echiche, site na ịnye ọnụahịa peeji nke, site na akakabarede. Tụle na ịghọta usoro ndị mmadụ na-eme nwere ike inyere gị aka ime ka ụzọ ndị ahụ dị mfe, ikekwe ịchikọta ụfọdụ ọdịnaya, na ịnye otu peeji enweghị ntụpọ nke na-aza ajụjụ niile achọrọ.
Nke a bụ echiche nke Akụkọ KISSmetrics Path, ị nwere ike pịa ya iji were maka ule-mbanye:
Tags: ụzọ ntụgharịUdogbeakụkọụzọ ịbanye
Nke a bụ ihe kpatara ndị mmadụ ji kpọọ ọdịnaya gị asị